Madaxweynaha Soomaaliya muxuu u jeediyey Hoggaamiyaasha Afrika ee ku shirsan Adis Ababa? • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Madaxweynaha Soomaaliya muxuu u jeediyey Hoggaamiyaasha Afrika ee ku shirsan Adis Ababa?
Madaxweynaha Soomaaliya muxuu u jeediyey Hoggaamiyaasha Afrika ee ku shirsan Adis Ababa?
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xassan Shiikh Maxamuud ayaa ka mid ahaa Hoggaamiyaasha Africa ee shirku maalinti shalay (Axad) uga furmey Caasimadda Itoobiya ee Adis-ababa isla markaana ah Xarunta Midowga Afrika.
Madaxweynaha ayaa khudbadii uu ka jeediyey shirka uga hadley arrimo badan oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya, Qaxootiga Soomaaliyeed ee dalalka dersika, dhaqaalaha, dhismaha nabadda, dhismaha ciidanka Soomaaliya iyo xiriirka caalamiga ah.
Ugu horeyntii Madaxweynaha ayaa mahad u celiyey dalalka Midowga Afrika dedalkii ay ka geystey Soomaaliya sidii ay nabad ugu soo laaban lahayd cagaheedana isugu taagi lahayd.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa mar uu ka hadlaayey xiriirka caalamiga ah ka codsaday walaalaha Afrika in ay safaaradahoodi ka furtaan Muqdisho, isla markaana maalgashi loogu samaysto Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa ugu baaqey dalalka haya qaxootiga Soomaaliyeed in ay dulqaataan maadaama ay soo sabreen intii badneyd isla markaana dhawaan dowladdu u samayn doonto qorshe ay dadkeeda ku soo celiso, Madaxweynaha ayaa sheegay in qorshahaas ay kala tashan doonaan hay’adda UNHCR.
Madaxweynaha ayaa ku celiyey mar kale in Midowga Africa kala shaqeeyo Soomaaliya sidii looga qaadi lahaa cuno qabataynta hubka ee saaran, si loo dhiso ciidamo hanan kara amniga.
Madaxweynuhu waxa uu dalalka Midowga Afrika ka dalbadey in ay gacan siiyaan Soomaaliya maadaama ay ahaayeen dalkii wax ka dhisey urur Midowga Afrika kana qaybqaatey xornimadoonkii dalal badan oo Afrikaan ah, maantana ay u baahan yihiin gacanta walaalahood.
Madaxweynnaha Soomaaliya ayaa kulamo la qaatey muddadii uu Adis-Ababa joogey Madaxweynayaasha dalalka Equetorial Guinea,Tunisia,Kenya iyo Nayjeeriya. Waxaa kale uu la kulmay Xogahyaha Guud ee Qaramadda Midoobay, waxaana uu dhamaantood kala hadley xiriirka Soomaaliya iyo dalalkaas iyo sidii iskaashi u dhexmari lahaa.
Shirka 20 aad ee Midowga Afrika uga socda Adis Ababa ayaa lagu wadaa in uu maanta soo xirmo, waxaana shirka hareysey qaddiyadda dalka Maali oo dalalka Galbeedka Afrika dhaqaale ay ku fuliyaan AFISMA raadinayeen.